» डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा यो साता कसले मार्ला बाजी ?
डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा यो साता कसले मार्ला बाजी ?
१४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १७:२१
मकवानपुर, १४ कात्तिक । विश्वप्रसिद्ध डान्सिङ रियालिटी शो ‘डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल’ मा यो साता उत्कृष्ट ९ जोडीहरु र एकजोडी वाईल्ड कार्ड ईन्ट्रीको प्रतिस्पर्धा हुँदेछ । शोको दोस्रो ईलिमिनेसन विक पार गर्दै अघि बढेका यी जोडीहरुले गत साता र यो साता प्रस्तुत गर्ने प्रस्तुतिसँगै निर्णायकको मत र दर्शक भोटका आधारमा एक जोडीले शो छोड्नेछन् । प्रतियोगिताको यो हप्ताको शनिबार बाह्रौँ एपिसोडमा ईलिमिनेसन हुनेछ । त्यसैले यो हप्ता एकअर्कालाई उछिन्नका लागि यी जोडीहरुबिच कडा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । तपाईको विचारमा उनीहरुमध्ये क–कसले अर्को साताका लागि बाजी मार्लान् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यो साता भिडन्ेहरुमध्ये कलाकार प्रशान्त ताम्राकार र कोरियोग्राफर स्वयत्ना योञ्जनको जोडीले गत हप्ता २६ अंक प्राप्त गरेको थियो । प्रयत्न जोडीले पाँचौँ नृत्य सकिँदासम्म जम्मा १२७ अंक प्राप्त गरेको छ । यो जोडीले पहिलो हप्ता ल्याटिन रम्बा, दोस्रो हप्ता ज्याज, तेस्रो हप्ता सेमिक्लासिकल, चौथो हप्ता भिईनिज वाल्ज र पाँचौँ हप्ता हिपहप ट्याङ्गो डान्स फर्म प्रस्तुत गरेका थिए । यो जोडीले एक पटक बटम थ्रीको सामना गरेको छ । हेर्नुहोस् यो भिडियो सामग्री–
त्यस्तै सृष्टि केसी र केशव थापाको जोडीले गत साता २६ अंक प्राप्त गरेका थिए । पहिलो नृत्यबाट नै पर्फोमेन्स अफ द विकको अवार्ड जितेको सृशव जोडीले पाँचौँ हप्ता सकिँदासम्म जम्मा १३९ अंक प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले पहिलो हप्ता फ्युजन अफ वाल्ज, दोस्रो हप्ता आफ्रो मिक्स, तेस्रो हप्ता कन्टेम्प्ररी,चौथो हप्ता बचाटा र पाँचौँ हप्ता ओपन स्टाईल डान्स फर्ममा प्रस्तुति दिएका थिए । फुटबलर हरि खड्का र कोरियोग्राफर युमी बलामीको हामी जोडीले गत साता २६ अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले पाँचौँ हप्ता सकिँदासम्म जम्मा १२७ अंक प्राप्त गरेका छन् । हामी जोडीले पहिलो हप्ता फ्रि स्टाईल, दोस्रो हप्ता ओपन स्टाईल, तेस्रो हप्तामा फङ्क ज्याज, चौथो हप्ता ओपन स्टाईल र पाँचौ हप्तामा पनि ओपन स्टाईल डान्स फर्ममा डान्स गरेका थिए । यो जोडीले एकपटक बटम थ्रीको सामना गरेका छन् ।
त्यस्तै गायक बुद्ध लामा र कोरियोग्राफर केबिका खत्रीले पनि गत साता २६ अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले पाँचौँ हप्ता सकिँदासम्म जम्मा १३० अंक प्राप्त गरेका छन् । स्टेजमा बुद्धिका जोडीका नामले चर्चा कमाउन सफल उनीहरुले पहिलो हप्ता फ्री स्टाईल, दोस्रो हप्ता तामाङ सेलो, तेस्रो हप्ता कन्टेम्प्ररी, चौथो हप्ता ओपन स्टाईल र पाँचौँ हप्ता हाउस डान्स फर्म प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरुले एक पटक बटम थ्रीको सामना गरेका छन् । गायिका ज्योति मगर र कोरियोग्राफर लाउरे सिंहले गत साता २५ अंक प्राप्त गरेका थिए । स्टेजमा ज्योतिला नामबाट परिचत उनीहरुले पाँचौँ हप्ता सकिदासम्म जम्मा १३० अंक प्राप्त गरेका छन् । ज्योतिला जोडीले पहिलो हप्ता कन्टेम्प्ररी, दोस्रो हप्ता कलि–हप, तेस्रो हप्ता कल्चरल मगर डान्स, चौथो हप्ता कन्टेम्प्ररी र पाँचौँ हप्ता मारुनी डान्स फर्म प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस्तै टिकटक ट्विन्स दिपा–दमन्ता श्रेष्ठ र कोरियोग्राफर सुनिल बिकको जोडीले गत साता २७ अंक प्राप्त गरेको थियो । स्टेजमा सुदिमन्ता नामले परिचित यो जोडीले पाँचौँ हप्ता सकिँदासम्म जम्मा १३८ अंक प्राप्त गरेका छन् । यो जोडीले पहिलो हप्ता टटिङ एण्ड पपिङ, दोस्रो हप्ता ओपन स्टाईल, तेस्रो हप्ता कलिहप, चौथो हप्ता ओपन स्टाईल र पाँचौँ हप्ता कलिहप डान्स फर्म प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरुले पाँचौँ हप्तामा पहिलो पटक पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए । नायिका सुमी मोक्तान र कोरियोग्राफर बिजु पार्कीको जोडीले गत साता २३ अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले पाँचौँ हप्ता सकिँदासम्म जम्मा १३९ अंक प्राप्त गरेका छन् । यो जोडीले एक पटक बटम थ्रीको सामना गरिसकेको छ । स्टेजमा सुबिजु नामले परिचित यो जोडीले पहिलो हप्ता फ्रि स्टाईल कन्टेम्प्ररी, दोस्रो हप्ता कन्टेम्प्ररी, तेस्रो हप्ता एरियल एण्ड एक्रोब्याट, चौथो हप्ता थिएटर र पाँचौँ हप्ता कलिउड हिपहप डान्स फर्म प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस्तै लिटिल स्टार दिभान्सी बैदवार र सिद्धार्थ श्रेष्ठको जोडीले गत साता २६ अंक प्राप्त गरेका थिए । स्टेजमा देवार्थ जोडीका नामले परिचित दिभान्सी र सिद्धार्थले पाँचौँ हप्ता सकिँदा सम्म जम्मा १३३ अंक प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले चौथो हप्तामा पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड पनि जितेका छन् । उनीहरुले पहिलो हप्ता फ्रि स्टाईल, दोस्रो हप्ता कलिउड, तेस्रो हप्ता लकिङ, चौथो हप्ता झ्याउरे र पाँचौ हप्ता हिपहप डान्स फर्ममा प्रस्तुति दिएका थिए । फुलन्देकी आमाका रुपमा परिचित कलाकार उमेश राई र कोरियोग्राफर प्रमोद भण्डारीको जोडीले गत साता २८ अंक प्राप्त गरेका थिए । स्टेजमा आमोद जोडीका नामले परिचित यो जोडीले पाँचौँ हप्ता सकिँदासम्म जम्मा १३२ अंक प्राप्त गरेका छन् । यो जोडीले दोस्रो हप्ता पर्फाेमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए । उनीहरुको जोडीले पनि एक पटक बटम थ्रीको सामना गरिसकेको छ । उनीहरुले पहिलो हप्ता फ्रि स्टाईल, दोस्रो हप्ता कलिहप, तेस्रो हप्ता ओपन स्टाईल,चौथो हप्ता कलिहप र पाँचौँ हप्ता बेली डान्स फर्ममा डान्स गरेका थिए ।
त्यस्तै डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा पहिलो वाईल्ड कार्ड ईन्ट्रीका रुपमा प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका जोडी कलाकार प्रियना आचार्य र कोरियोग्राफर शुभम भुजेलले पनि गत सातादेखि शोमा प्रतिस्पर्धा सुरु गरेका छन् । स्टेजमा प्रियम जोडीका नामले परिचित यो जोडीले शोको पाँचौँ हप्तामा वाईल्ड कार्ड ईन्ट्री पाएका थिए । यस समयमा शोको उत्कृष्ट ९ जोडीहरु छानिसकिएका थिए । शुभम र प्रियनाले पाँचौँ हप्तामा आफ्नो पहिलो नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए । यो जोडीले पाँचौँ हप्तामा २४ अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले पाँचौँ हप्तामा ओपन स्टाईल डान्स फर्म प्रस्तुत गरेका थिए ।